Howgalo Ay Ciidamada Amniga Gobolka Hiiraan, Ay Ka Sameeyeen Magaalada Baladweyne – Great Banaadir
BALADWEYNE – Ciidamo kala duwan oo ku sugan Gobolka Hiiraan, ayaa lagu soo waramayaa in Howlgallo is-daba jog ah ay ka wadaan Xaafadaha Magaalada Baladweyne oo ah Xarunta Gobolka Hiiraan, iyo Degaannada ku xeeran; si markaasi loo xaqiijiyo Amniga Goobaha lagu wado inay dhowaan ka qabsoomaan Doorashada Xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya ku matalaya Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle.
Taliye Ku-xigeenka Ciidanka Boliiska ee Dowlad Goboleedka Hir- Shabeelle, Xasan Maxamed Ibraahim ayaa sheegay in Dowlad Goboleedkan ay u diyaargarowday marti gelinta Doorashada Saamiga Kuraasta Baarlamaanka Heer Federaal ay ku leeyihiin Xildhibaannada Maamul Goboleedka Hir-Shabeelle.
Taliyaha Guutada 5aad, Qeybta 27aad ee Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliya ayaa isna sheegay inay xil ballaaran iska saareen Qabsoomidda Doorashada, isagoo Bulshada ka codsaday inay ku garab istaagaan Sugidda Amniga.
Saraakiishan isugu jirta Boliis, Millitari iyo Nabad Sugid, ayaa dar-daaran buuxa siisay Ciidamada kala duwan ee loo diyaariyay Xaqiijinta Amaanka Guud iyo Goobaha ay ka dhacayaan Doorashooyinka, waxaanay fareen inay soo dhoweystaan Bulshada, si ay xogta ula wadaagaan.
Isha Warkan: Somali Weyn News